Ederede Chris Lucas na Martech Zone |
Edemede site na Chris Lucas
Tuesday, January 5, 2016 Wenezdee, Jenụwarị 6, 2016 Chris Lucas
Na Tọzdee, Septemba 25, 2012 Na Tọzdee, Septemba 25, 2012 Chris Lucas
Nke a bụ ihe dị n'ime CIO's na ndị otu ọrụ teknụzụ gị achọghị ka ị mara, mmejuputa ngwanrọ nke ọnwa 18 nke ga-efu gị $ 500K - $ 1MM nwere ike ịme hel nke otutu dị ọnụ ala… ma kwesịrị ịdị. Ha na-ewulite nchebe ọrụ n'ihi na ọtụtụ ndị isi ọkwa C na ndị ahịa anaghị aghọta etu teknụzụ nwere ike isi rụọ ọrụ. Dị ka ndị ahịa anyị niile chọrọ ngwanrọ ngwanrọ nke unicorn. Onye na - edu ndu, ihe okike, na - eduga ndu,
Enweghị asịsa kemgbe blanket mkpuchi ụlọ ọrụ na ndị mmadụ n'otu n'otu ejirila dịka ọta mgbe ọ bụla akụkọ ọjọọ ma ọ bụ nyocha ọha na eze bilitere. N'ụwa ochie ebe ndị mgbasa ozi weere mgbasa akụkọ dịka ozi ọma na ebe ụlọ ọrụ nwere ike ijikwa ozi Enweghị asịsa rụọ ọrụ ịzụta ụlọ ọrụ ahụ oge ụfọdụ. Taa, Enweghị asịsa anaghị arụ ọrụ. Jụọ Tiger Woods. Ngwaọrụ soshal midia na-enye mmadụ niile ohere ịza ajụjụ. Ọ pụtara na ọ bụrụ na gị ma ọ bụ azụmahịa gị
Anyị nwere otu onye gwara anyị na anyị, ma ọ bụ kama anyị ụdị ụlọ ngwa, abụghị “sexy”. N'ụzọ ụfọdụ echere m na onye ahụ ziri ezi. Msdị, site n'onwe ha abụghị sexy, mana nye ndị na-eji ha ma dabere na ha iji kpokọta data, ha bụ, ma ọ bụrụ na ọ bụghị sexy, ezigbo m achọ ịma. Yabụ kedu ka gị, onye nwe azụmaahịa, ahịa, wdg, nke nwere ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ nke na-abụghị “agụụ mmekọahụ” na-eme ya “agụụ mmekọahụ”? Ebe a
Na Mọnde, Nọmba 10, 2009 Monday, October 8, 2012 Chris Lucas
N’izu gara aga achọtara m ezigbo ihe atụ nke ụzọ adịghị egbochi egbochi iji ahịa email dị ka ụzọ isi mee ka okporo ụzọ gaa na mgbasa ozi mmekọrịta. Ozi email ahụ sitere na Dick's Sporting Goods. Ọ bụ ozi dị mfe, nke a haziri nke ọma nke nwere oku dị mfe iji mee ihe: Soro anyị na Twitter ma nata koodu ego efu: Ihe kpatara na ọ dị mma Dick ji rụọ ọrụ nke iji ngwa ọdịnala, ahịa email, iji mee ka okporo ụzọ gaa
Kwa mgbe na mgbe m na-abịa gafee posts-ekwu okwu banyere otú ndị mmadụ achọghị “itinye aka” na ụdị na-elekọta mmadụ media na na gị ika ekwesịghị ịbụ ebe, ọ kwesịrị ndị mmadụ, wdg, wdg Ndị ọhụrụ bụ a post site n'aka Mike Seidle, onye na-ede blọgụ mpaghara na onye ọchụnta ego. Achọrọ m okwu mmalite na m na-amaghị Mike na m nwere ihe ọ bụla megide ya. M na-eso ya na Twitter ma echere m na ọ nwere ụfọdụ
Monday, September 21, 2009 Wenezdee, Jenụwarị 29, 2014 Chris Lucas
N'ime ọrụ m naFormstack, onye na-ewu ntanetị n'ịntanetị, otu ọrụ m bụ ịkwalite mmekọrịta ọha na eze (PR) yana mkpuchi mgbasa ozi, nke na-eme ka ikpughe ma na-ere ahịa. Inwe ahụmahụ ma na ụlọ ọrụ na ndị ahịa n'akụkụ m ghọtara ihe ezigbo mmekọrịta ọha na eze nwere ike ime maka nzukọ. Ndị a bụ ihe atọ, site na ahụmịhe m, ihe kpatara azụmaahịa, ọkachasị obere azụmaahịa, ga-eji were ọrụ ụlọ ọrụ na-abụghị PR. Don't Nweghị Oge Inwe